Igqirha uMat Whelan kwiBali eliNyanisekileyo lamaBali emva kweNarcos yeXesha le-3 AU - Inkcubeko Yopopu
Ugqirha uMatt Whelan kwiBali eliNyanisekileyo laMva kweNarcos yeXesha le3
Zininzi izinto ekunokuthethwa ngazo INarcos . Ngokwam, ndifumanisa ukuba kuphela komboniso apho ndingakhange ndibhenele ukubetha iqhosha lesingeniso -Izwi likaRodrigo Amarantes li-sanguine kakhulu kwaye liyancipha. I-lullaby yakhe eyonakeleyo u-Tuyo ugqunywe yimiboniso yamaphupha e-cartel enziwe ngawo: iisutikheyisi ezigcwele imali kunye necocaine, abafazi abathandekayo, izilwanyana ezingaqhelekanga, izithonga zomoya ezibonisa ifuthe elikhulu elinokuthengwa yimali yegazi kuphela. Ukufakwa kwiindawo ezibonakalayo zezakhiwo, umlilo, kunye nezidumbu, ezibulewe ezitalatweni-isikhumbuzi esiyimfuneko sokuba iinqwelo zishiya ukutshabalalisa, kwaye akufanele zithandwe. Amaxesha onyaka amabini anesibini abekwa kwiminyaka yee-80s - njengoko kuchaziwe kumfanekiso kaReagan oxhonywe eludongeni. Ngexesha lokuhlala kwakhe, uReagan wabeka phambili imfazwe kwiziyobisi, kwaye wayengumxhasi omkhulu wokukhutshwa elizweni.
Ixesha lesithathu lokuvula i-montage libonisa iintshaba zikawonke-wonke ezinenombolo yokuqala-iCali Cartel- kunye neshumi leminyaka abalawula ngalo. Ngo-1993 kwaphawulwa ukuqala kolawulo lukaClinton - obonwe apha kwimifanekiso equlunqwayo kaBill noHillary, bencumile kwaye bewangawangisa njengoko behla kwinqwelo-moya. Isidumbu esiphakamileyo sijonga ngasemva. Ngo-Novemba u-1993, u-Clinton watyikitya isivumelwano se-North American Free Trade Agreement (NAFTA), esonyusa urhwebo ngaphesheya komda we-US-Mexico, kwaye ngokungazi wavula imida kwiziyobisi ezingekho mthethweni. Yayisisivumelwano esenziwa ezulwini narco.
Ukuqikelela, ixesha lesibini iphele ngokusweleka kukaPablo Escobars. Nangona iimbaleki zemiboniso uJosé Padilha kunye no-Eric Newman ngokucacileyo bevula indlela yokuthatha iCali Cartel, abalandeli bahlala benoloyiko ngomboniso ngaphandle kolawulo lwenkosi. Umlingisi owazalelwa eNew Zealand uMatt Whelan, ozibandakanya nabalingisi kwisizini yesithathu, unethemba.
Ndicinga ukuba ufikelele kumhla onamaxesha onyaka, kwaye ubukele ukuphela kwexesha lesibini, emva koko kukuqhubela phambili okunengqiqo ukususela ekuweni kuka-Escobar, utshilo uWhelan. Uya kwaziswa nge-Cali Cartel, kunye nendlela abalisebenzise ngayo ithuba lokuwa kweMedellin Cartel ukuze baphumelele ngakumbi kunoPablo. Banebali elimangalisayo abanokulixelela, kunye nendlela eyahluke ngokupheleleyo yokwenza izinto. Ndicinga ukuba obuqili kunye nobundlongondlongo njengakwiisizini ezimbini ezidlulileyo.
Isibindi se-muriel ilizwi lenja eligwala
Kukho ukuphola okuthile xa kusiza- i-Cali Cartel- kwaye ingayikhanyisi kakhulu, kodwa kukho into eyahlukileyo kubo.
Zimkile ii-Escobars ii-jumpers ezingenaxhala notata. Oothixo bakaCali, kwihempe zabo zesilika, iisuti ezinxitywe kunye neenwele ezinamafutha, bayasinda njengoko besoyikisa.
Zonke iinkcukacha zesitayile zifumana ukulungiswa kweli xesha lonyaka-nditsho nengoma yesandi. Iminyaka yama-90 yavelisa isizukulwana esitsha se-hip-hop, kwaye ndikucela umngeni ngoku ukuba ufumane inqanawa engcono yokukhangela imali, iziyobisi, amandla, ukuthungwa,… abantu ababhinqileyo, ukuxokozela, njalo njalo. Itreyila yexesha lesithathu ivula ngemigqomo evakalisa iimbumbulu zeBell Div Devoes Poison , kwaye uvale ngeCypress Hills odelelayo NdinguAint Ukuphuma ndinjeya. Ixesha liza kuxela.
Ilifa le-Escobars yi-canon ngoku. Kodwa ukuba ujonga amanani, iCali Cartelbabenjaloiimayile ngaphambili. Kwincopho yakhe, u-Escobar wayefumana i $4Bngonyaka. UCali ufumene i $15B. Baye bahambisa iitoni ezingama-340 zecocaine rhoqo ngonyaka, kwaye ngaxesha lithile babenoxanduva lwe-80% yehlabathi lokusetyenziswa kwecocaine. Ngokungafaniyo nabandulelayo, bakhetha ukuhlala ngaphandle kwezihloko, kwaye kude neliso elibukhali le-DEA. Ngokuqinisekileyo babengekho nxamnye nobundlobongela (indawo eyoyikisayo ebandakanya i-chainsaws izaingqondo),kodwa bakhetha ukunyotywa kunemipu. Basebenzise itekhnoloji yakutshanje- i-beepers, iiselfowuni, ii-wire-taps, iikhompyuter ezizigidi zeedola- ukwenza imisebenzi yabo, kwaye babenamapolisa, amagosa aseburhulumenteni, kunye nomongameli wexesha elizayo kwimivuzo yabo. Njengo-Agent Pena (uPedro Pascal), yayiyi-Cocaine Incorporate, kwaye bayigijimisa njengenkampani ye-Fortune 500.
indlela yokusebenzisa isikali sokutya
Kunye Zine abaphathi-bamadoda ngoku kumxube-nganye inefusuzi emfutshane kunale yokugqibela - i-arali yeCali Cartel iba yinto engaphaya kwamandla kune-Escobars. Abasunguli - abantakwabo Gilberto (Damian Alcazar), umphathi wabaphathi, kunye noMiguel Rodríguez Orejuela (uFrancisco Denis), iingqondo ezazisemva komsebenzi. Imizuzwana yabo yokuyalela nguPacho Herrera (Alberto Ammann), indoda ebalekayo eqhuba uxhulumaniso lwaseMexico kunye nolwabiwo lwamazwe aphesheya, kunye noChepe Santacruz Londono (Pepe Rapazote) ophethe uthungelwano lokusasaza eNew York. Nangona belusapho, ukunyaniseka kwabanye abathathu kuya kuba sesichengeni xa uGilberto ebhengeza isicwangciso sokuzinikezela kwabasemagunyeni, endaweni yokufumana izivakalisi ezincinci kunye nokugcinwa okukhulu kobutyebi babo.
Ngeli xesha, uBoyd Holbrook, owayedlala iAgent Steve Murphy, uwushiyile umboniso, eshiya iqabane lakhe uJavier Pena ukuba akhokele olo hlaselo. Ujikelezwe ziiarhente ezimbini ezintsha, ezingenamava: UChris Feistl (Michael Stahl-David) noDaniel Van Ness (Matt Whelan). Ngesiqingatha, ukuba akukho ngaphezulu komboniso oseSpanish, ingxelo ebhalwe nguHolbrooks njengoSteve Murphy wanika umboniso kwilizwi lakhe laseMelika. Inike imeko yabaphulaphuli, ibakhumbuza ukuba iimpembelelo zemfazwe kwiziyobisi zichaphazela bonke. Ngokumka kukaHolbrooks, le ndima inikezelwe kuPena.
Ndikuthandile ukubona [uPedro Pascal] kule ndima intsha ekhokelayo, utshilo uWhelan ngeqabane lakhe. Ndicinga ukuba kwakulungile kuye ukuba ahlale ebhodini kwaye athathe inxaxheba kwilizwi lokuthetha-amandla aqhubayo, ndiyaqikelela. Unendoda enetalente emangalisayo kwaye imnandi kakhulu, kwaye ndicinga ukuba ndiyibethelele. Ndicinga ukuba wonke umntu uza kumiswa ukuze abone ukuba wenza ntoni.
Njengokuba uMurphy noPena babengabameli bobomi bobabini ababesebenza kwityala lika-Escobar, uFeistl noDave Mitchell babenoxanduva lokuwisa iCali Cartel (ubuntu bukaWhelans babizwa ngokuba ngumboniso kuba uMitchell usengummeli osebenzayo).
Ndenze uphando oluninzi kwiCali Cartel, kunye nokuba kwakunjani ukuba kwi-DEA. Sibe nonxibelelwano oluhle- uChris (Fiestl) - yehla. Ndifunde lukhulu ngesimilo sam ngaye.
NangonaWhelankusenokwenzeka ukuba uyifumene inika umdla ukuphanda ngale ndima, umlinganiswa wakhe uVan Ness kakhuluengaqinisekangamalunga nokuleqa iCali Cartel.
Unembali emkhosini, kodwa ngoku hes uye wafudukela kwinqanaba elilandelayo lomsebenzi wakhe. Ukonwabe kakhulu ukuba se-ofisini kunakwilayini yangaphambili. Emva koko urhuqelwa ezintweni, ngokungathandabuzekiyo, nguChris. Idala ibanter eninzi kunye noxinzelelo phakathi kwabo, kwaye ekugqibeleni iyabomeleza ubudlelwane babo. Ngalo lonke ixesha lonyaka, uDaniel uyaqonda ukuba yile nto ayithandayo ukuyenza, kwaye ke uyaqhutywa kwaye azibandakanye kwinkqubo yokuthatha iCali Cartel.
Umboniso uthatha inkululeko ethile yempembelelo enkulu, kodwa uninzi lweziganeko ezibonisiweyo zisekwephakathiinyaniso. (ISILUMKISO: UKUPHATHA) Ngo-1995, bebambe ngempumelelo uGilberto, abezomthetho bajika baya kumntakwabo uMiguel. Ngoncedo lwempimpi, bamlandela bamfumana kwigumbi eliphezulu. Iqela lokukhangela liye lajongainzima,kodwa akafumananga namnye umqondiso. Baqala ukucofa umphezulu kunye nokubhola kwiindawo ezingenanto. Kumboniso, uVan Ness wakhe, oqinisekileyo ukuba uMiguel usemva kodonga, uzilolonga kulo ngaphambi kokulubetha ngesamente. Kodwa ngaphambi kokuba afike kwisoyikisonarco(Inyama ogama ngokwenene ukuhlangabezana drill), namarhataa ezimdaka bafika kwaye iphele ngokusebenza, becaphula ukunqongophalaIsiqinisekiso. Eyona nto yayiyeyona fowuni isondeleyo ukusukela ngeCuban Missile Crisis.
Ngokwenene uphume kula caleta (igumbi elifihliweyo) egxalabeni - khange ndikholelwe xa ndiyifunda. Bekusondele kakhulu, ukanti ukuza kuthi ga ngoku. Kwakumangalisa ukuba injani impembelelo enayo le kartel kubantu abaninzi: abezopolitiko, amapolisa, nabaqhubi beeteksi ...
INarcos Ifotwa ngokupheleleyo eColombia, imbibing ubuninzi bembali yayo etyebileyo kunye nobume bayo obukhethekileyo kangangoko kunokwenzeka. Amaqela e-guerilla axhumene neCartel azimela phakathi kwamahlathi ashinyeneyo; coca plant ifama kumhlaba wayo obanzi, olimekayo; I-Cali Cartel iqhube ishishini kuyo yonke indawo edolophini.
uninzi lwezikhombisi kumdlalo nba
Sidubule uninzi lwexesha lesithathu eBogota, ubukhulu becala kwindawo. Incinci kakhulu kuyo yadutyulwa kwisitudiyo. E-Cali, sidubule kwiindawo ezininzi apho kwenzeke khona iziganeko zokwenyani, njengakwii-sicarios mansions- izindlu ezinkulu, ezinkulu. Emva kokuba i-cartel yehlisiwe, uninzi lwezi zakhiwo ziye zayekwa kwaye zashiywa, kuba abantu boyika ukufudukela ngaphakathi, ngenxa yezizathu ezicacileyo.
Sichithe iveki noChris (Feistl) kukhenketho lwaseCali, apho asisa khona sijonga zonke izindlu zekartel, iindawo ezifihlakeleyo kunye nezakhiwo abazihlaseleyo. Kwakumangalisa ukuba semhlabeni kwaye uye kwezi ndawo zokwenyani, kwaye ndicinga ukuba yongeza inqanaba elongezelelweyo lobunyani kumdlalo.
Kususwe imali engaphaya kwesigidi sezigidi zeerandi ukusukela oko uNixon wabhengeza okokuqala imfazwe neziyobisi ngo-1971. ICali Cartel yawa ngaphezulu kwamashumi amabini eminyaka eyadlulayo, kodwa ukuthengiswa kweziyobisi kuhlala kuxhaphakile, kwaye kusatshabalalisa ubomi babantu. Yintoni enika?
Ukurhweba ngeziyobisi kubeyinxalenye enkulu yembali yeColombias, kwaye kwenza umdla kunye nenxalenye entsonkothileyo yelizwe namhlanje. Ndicinga ukuba kufuneka uthathe ezo mpumelelo zincinci apho unakho, kodwa ekugqibeleni amandla alo aqhubeka nokuqhuba. Ukucaphula i-tagline yexesha lesithathu, ukuvuthelwa kufuneka kuqhubeke.
Ixesha elitsha liza ngoSeptemba 1.
Iresiphi yekhekhe yealmond ngomxube wekhekhe
Eyona ndlela ilungileyo yokutya ikhekhe emhlabeni
rose leslie and kit harington umtshato